Armstrong Senior Oo Kasbaday Dhibcaha ACT Oo Dhameystiran | maqaalka
Mio Aoki-Sherwood, oo ah sarkaal sare oo ka tirsan Dugsiga Sare ee Armstrong (AHS), ayaa ku guuleystay heer aad u tiro yar oo arday ah oo dalka oo dhan gaadhay: dhibco fiican oo ku saabsan imtixaanka ACT.
Dhibcaha ugu badan ee ardaygu ku kasban karo ACT, taas oo ah imtixaan la jaangooyey oo loo adeegsado gelitaanka kuleejka, waa 36. Sida laga soo xigtay hay'adda ACT, ee 1.9 milyan ee arday ah ee sanad walba imtixaanka gala, kaliya qiyaastii 3,700, ama .0019 boqolkiiba, hel dhibcaha ugu sareeya ee suurtogalka ah.
"Xaqiiqdii waan faraxsanahay markii aan bartay natiijadayda, waxyarna waan la yaabay maxaa yeelay waxay ahayd markii iigu horreysay ee aan imtixaanka galo sidaa darteed runtii ma aanan aqoon waxa laga filan karo," ayuu yiri Aoki-Sherwood.
Dhibcaha ugu fiican ee ACT maahan abaalmarinta kaliya ee tacliinta Aoki-Sherwood ay kasbatay dhowaan. Horaantii bishaan sidoo kale waxaa loo magacaabay gabagabeyn sharaf qaran . Waa isku xirnaan wanaagsan oo guul u ah arday dhawaan ka qalin jebin doona dugsiga sare.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan nasiib u yeeshay inaan helo jawi waxbarasho oo taageero leh oo ii oggolaaday inaan ku guuleysto ACT iyo tallaabooyinka kale ee tacliinta," ayay tiri.
Maamulaha AHS Erick Norby ayaa sheegay in Aoki-Sherwood uu yahay arday la wado oo layaab leh, waana mid dhiirigalin u ah aqoonyahanada kale ee iskuulka. "Waan ku faraxsanahay iyada," ayuu yiri Norby. Iyadu waa kuwa karti badan waxayna u qalantaa guusha iyo abaalmarinta ay kasbatay.
In kasta oo ay mahadsan tahay, waxay sheegtay in ay ku qaadanayso dhammaan aqoonsiga tallaabo tallaabo ah. "Waan ku faraxsanahay, qoyskeyguna sidoo kale waa ay ku faanaan wax qabadkan, laakiin qoyskeyga iyo aniga ma jecli inaan xooga saarno dhibcaha imtixaanada mideysan madaama dhibcahaani aysan qeexeynin ama cabiraynin qiimaha shaqsiyeed," ayay tiri. .
Aoki-Sherwood waxay tagi doontaa kulleejada Cornell ee Iowa xilliga dayrta, iyo Sayniska Deegaanka ama goob la mid ah ayaa u badan aaggeeda waxbarasho, in kasta oo ay sheegtay inay fursadaha u furan tahay. Waxay sidoo kale rajeyneysaa inay sii wado kaqeybgalka waxqabadyada manhajka ka baxsan sida orkestra iyo wadanka gudba.
Dhammaan-dhammaantood, kasbashada dhibco ACT oo qumman, iyo noqoshada abaalmarinta Qaranka - Aoki-Sherwood ayaa sheegtay in aysan wax badan ka beddelin iyada. Ugu dambayntii, iyada unbaa mahad leh.
"Hal dariiqo oo dhibkeyga si dhab ah iiga faa'iidey ayaa ah in hay'ado badan oo aan dalbaday ay i siiyeen deeqo wax ku ool ah oo muhiim ah, oo ay ku jiraan Cornell College, waana ku faraxsanahay inaan helay fursadahaas oo ka dhigaya waxbarashada kuleejka mid aniga igu qiimo badan.